Umbhalo oselwandle owenziwe ngumculi uLia Melia | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubugcisa obungabanjwanga bunokukhokelela kwi yenza umfanekiso onokubaleka ngokupheleleyo yinyani kwaye yenziwa kuphela engqondweni yalowo ucinga ngomsebenzi womzobi othile onomdla onamandla kule ndlela yokuthetha.
Umzobi waseBritane uLia Melia uzisa inqaku elingaqondakaliyo kolo hlobo lwe oolwandle apho kuqhekeka amaza ngemilo entle yokuwola unxweme. Ngombala wempuphu unyibilikisiwe kwaye wabhakwa kwialuminiyam okanye kwiglasi, upeyinta ezo zinto zobugcisa esinokuthi siziphephe ngokugqibeleleyo okwethutyana ngokucinga kwakhe nje.
Obo bugcisa buthatyathiweyo bunokuthathwa njenge banal ngabanye kuba amaxesha amaninzi unokucinga ukuba kulula ukuyila ngempambano encinci kunye nobuchule. Kodwa baninzi abanomdla ngale ndlela yokuveza izimvo zabo kwaye apho kufuneka ubeneetalente ezifanelekileyo ukuze zingabi yinto ekrwada kwaye ekrwada okanye elula.
NguMelia ngokwakhe othetha ngutitshala wakhe owamfundisa ukuba akubalulekanga kangako ukuba nobuchule obukhulu, kodwa ke intliziyo nomphefumlo nazo ziyakwazi ukupeyinta ukwenza umsebenzi ofanele ukunconywa.
UMelia ngamanye amaxesha usebenzisa imixube emidakahlaza ukufumana ezo zinto zenziwe kunye nazo Ukuxuba imibala kukhokelela kwiziphumo Ukubetha kakhulu kwaye oko kunokunika ithamsanqa lokuyila izakhiwo ezahlukeneyo njengamandla endalo. Umsebenzi wentloko wale posi ngowona ufanelekileyo ukubonisa oku.
Ukulinga lolunye lweempawu zolu hlobo lobugcisa kwaye ngakumbi njengoko uMelia ephawula xa esonwabela ukuxuba ezo zombala eziyimpuphu ukufumana eyona indibaniselwano inomdla.
Unayo facebook wakho y iwebhusayithi yakho Ukuze ukwazi ukulandela umsebenzi wakhe apho ulwandle lufuna khona.
Olunye uhlobo lobugcisa obungabonakaliyo, kodwa yenziwe ngekhompyuter.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iilwandle ezinqabileyo zeLia Melia
Amagqabi awomileyo njengemifanekiso eqingqiweyo kaSusanna Bauer